Goobaha xafiiska Iibka iyo Ijaarka gudaha Malaysia
Xulo qaybAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Villas Bungalows Homes
Malaysia ((dhagayso) mə-LAY-zee-ə, -⁠zhə; Malay: [məlejsiə]) waa waddan ku yaal Koonfur-Aasiya. Boqortooyada dastuuriga ah ee federaalku waxay ka kooban tahay saddex iyo toban gobol iyo saddex dhulal federaal ah, oo ay u qaybiyeen Badweynta Shiinaha Shiinaha laba gobol, Jasiiradda Peninsular Malaysia iyo Borneo's East Malaysia. Jasiiradda Jasiiradda Malaysia waxay la wadaagtaa xuduudo dhuleed iyo badeed Thailand iyo xuduudaha badda oo ay la wadaagaan Singapore, Vietnam, iyo Indonesia. Bariga Malaysia waxay la wadaagtaa xuduudaha badaha iyo badda badda Brunei iyo Indonesia iyo xadka badda oo ay wadaagaan Filibiin iyo Vietnam. Kuala Lumpur waa caasimada dalka waana magaalada ugu weyn halka Putrajaya ay tahay kursiga dowlada federaalka. Iyada oo ay ku nool yihiin dad ka badan 32 milyan, Malaysia waa dalka 43aad ee dunida ugu dadka badan. Bartamaha ugu fog qaaradda Eurasia waxay ku taal Tanjung Piai. Xilliga kulaylaha, Malaysia waxay ka mid tahay 17 wadan oo megadiverse ah, oo ay ku nool yihiin noocyo kala duwan oo dabiici ah. Malaysia waxay asal ahaan ka soo jeedaa boqortooyooyinkii Malaysia kuwaas oo, laga soo bilaabo qarnigii 18aad, ay ku xukumaan Boqortooyadii Ingiriiska, oo ay weheliso ilaalintii British Resits Settlements. Jasiiradda Malaysia waxay u midowday Ururka Malayan sanadkii 1946. Malaya dib ayaa loo qaabeeyey iyadoo loo magacaabay Xiriirka Malaya 1948 waxayna heshay xornimo 31 Ogosto 1957. Malaya waxay la midowday North Borneo, Sarawak, iyo Singapore 16kii Sebtember 1963 si ay u noqoto Malaysia. Sanadkii 1965, Singapore waxaa laga saaray xiriirka. Dalku waa dhaqamo badan iyo dhaqamo badan. Qiyaastii nus dadka waa asal ahaan Malay, oo ay ku badan yihiin Shiinaha, Hindi, iyo dadka asaliga ah. In kasta oo Islaamku u aqoonsanayo inuu yahay dalka aasaasay diinta, dastuurku wuxuu siinayaa dadka aan Muslimka ahayn xorriyadda diinta. Dowlada waxay si dhaw ulashaqeyneysaa nidaamka baarlamaanka Westminster nidaamka qaanuunka wuxuu ku saleysan yahay sharciga guud. Madaxa dawlad waa boqoro la doortay, oo loo yaqaan Yang di-Pertuan Agong, oo laga soo xushay hoggaamiyeyaasha dhaxalka sagaalka dawladood ee Malay shantii sanadoodba. Madaxa dawlada waa Raiisel wasaaraha. Xornimada ka dib, GDP-ga Malaysian wuxuu koray celcelis ahaan 6.5% sanadkii sanadkiiba ku dhawaad ​​50 sano. Dhaqaalaha ayaa caado ahaan u huriyay ilaha dabiiciga ah laakiin wuxuu ku sii fidaa waaxaha sayniska, dalxiiska, ganacsiga iyo dalxiiska caafimaadka. Malaysiya waxay leedahay suuq suuq warshadeed oo warshado cusub ah, waxay gashay kaalinta 3-aad ee ugu weyn Koonfur Bari Aasiya iyo 33-aad ee adduunka ugu weyn. Waa xubin aasaase u ah ASEAN, EAS, OIC iyo xubin ka tirsan APEC, Dawlada Dhexe iyo Dhaqdhaqaaqa Aan La Aaminsanayn.
Xafiisku guud ahaan waa qol ama aag kale oo shaqada maamulka lagu qabto, laakiin sidoo kale waxay tilmaami kartaa jago ka dhex jira hay'ad leh shaqooyin gaar ah oo ay ku lifaaqan tahay (eeg sarkaalka, xafiiska xafiiska, sarkaalka); dambe waa run ahaantii adeegsi hore, xafiis ahaan asal ahaan tixraaca meesha shaqadiisa. Marka loo adeegsado sidii tilmaam, ereyga "xafiis" waxaa laga yaabaa inuu tixraaco howlaha la xiriira ganacsiga. Qoraal sharci ah, shirkad ama hay'ad waxay xafiis ku leedahay meel kasta oo ay ku leedahay joogitaan rasmi ah, xitaa haddii jiritaankaas uu ka kooban yahay, tusaale ahaan, meel keyd ah oo aan ahayn xafiis. Xafiisku waa ifafaale qaab dhismeed iyo naqshad; haddii ay tahay xafiis yar sida keydka geeska meheradda yar oo aad u yar (eeg xafiis yar / xafiis guri), iyada oo loo marayo dhammaan sagxadaha dhismayaasha, ilaa iyo ay ka mid yihiin dhismayaasha waaweyn ee loogu talagalay hal shirkad. Erayada casriga ah xafiisku badanaa waxaa loola jeedaa meesha ay ku shaqeeyaan shaqaalaha cad-cad. Sida James Stephenson, "Xafiisku waa qayb ka mid ah meheradda ganacsiga oo loo hibeeyo jihada iyo isku dubbaridka hawlaheeda kala duwan."
Dhammaan qeybahaDegaannoGuryaha la degan yahay